I Steven Paul Jobs, izay fantatry ny be sy ny maro amin’ny anarana Steve Jobs (teraka ny 24 Febroary 1955, ary maty ny 5 Oktobra 2011), dia olom-pirenena amerikanina miasa amina orinasa informatika, mpiara-namorona an’i Apple niaraka tamin’i Steve Wozniak ary Ronald Wayne tamin’i 1976. Efa talen’i Apple izy ary filohan’ny fandrindrana.
Anisan’ny nampandroso ny mikrô-informatika izy amin’ny fandraisany anjara amin’ny fampidirana ny solosaina ao amin’ny tokantrano amin’ny alalan’ny fampiarahana ny voalavo ary ny interface grafika. Izay heviny ny hampiditra ny solosaina ao amin’ny tokantrano izay dia hahatonga azy hivarotra ny Apple Macintosh tamin’ny 1984, misy ilay interface grafika ary voalavo.
voaroaka ny orinasa natsangany izy ary lasa namorona an'i NeXT, izay nividy ary nanitatra ny studiô hanaovana horonantsary Pixar. Niverina tao amin'i Apple izy tamin'ny 1997, izy no nihavian'ny fahombiazan'i Apple nandritra ny taompolo 2000 : ny iMac tamin'ny 1998, ny iPod ary iTunes tamin'ny 2001, ny iPhone tamin'ny 2008 ary ny iPad tamin'ny 2010. Lazaina fa olona faha-110 manan-karena indrindra eto an-tany izy tamin'ny taona 2011.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Steve_Jobs&oldid=768013"
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:09 ity pejy ity.